नेपालमा ह्वात्तै कोरोना संक्रमित बढेपछि यी नयाँ सहित सरकारले जारि गर्यो सर्वसाधारणका लागि सूचना ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/नेपालमा ह्वात्तै कोरोना संक्रमित बढेपछि यी नयाँ सहित सरकारले जारि गर्यो सर्वसाधारणका लागि सूचना !
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४२५ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्र`मण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सङ्क्र`मित भएकामा ३७५ पुरुष र ५० महिला रहेका छन् । योसँगै हालसम्म कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार ७६० पुगेको छ । यी मध्ये पुरुष पाँच ३२४ र महिला ४३६ छन् । आज सङ्क्रमित भेटिएको जिल्लामा रुकुम पूर्व थप भई ७३ जिल्ला पुगेको मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
थप एकको नि`धन
कोभिड–१९ सङ्क्र`मणले थप एकको निध`न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुल्मी धुर्कोक गाउँपालिका–४ का ३६ वर्षीय पुरुषको निधन भएको हो । जेठ १२ गते रुपन्देहीमा कोभिड पुष्टि भएको थियो । आइसोलेशनमा उपचाररत उनमा क्या’न्सर रोगको समस्या थियो । उनी भारतबाट आएका थिए । हालसम्म कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या १९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आजसम्म मुलुकभर एक लाख ४३ हजार ६४१ छ । आइसोलेशनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार ७६७ रहेको छ । यस्तै मोबाइल एप र म`न्त्रालयको बेवसाइटमा भरिएको विवरणका आधारमा रेड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या आज थप दुई गरी ४९८ पुगेको छ ।
अहिले बन्दाबन्दी खुल्ला भएसँगै मानिसको आवतजावत बढिरहेको र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने व्यक्तिले को`भिडको परी`क्षण गराएर मात्र जानुपर्ने भन्ने हल्लाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ग’म्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘‘कुनै पनि व्यक्ति बाहिर गएर आउँदा, यात्रा गर्दा सङ्क्रमण जो’खिम हुन्छ नै तर यात्राबाट आउँदैमा परीक्षण गरेर आउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशिकामा नभएकाले यस किसिमका कोही कसैको परीक्षण नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा अनुरोध छ’’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले ‘सम्बन्धित स्थानीय निकाय, घरबेटीलाई कोभिडको परी`क्षण गर्ने सरकारको माप`दण्ड छ’ जसलाई जहिले पनि परी`क्षण गर्दा स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नजान पनि अपिल गरेको छ । जानै परेमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अप`नाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै बाहिरबाट आउने व्यक्तिले आफँै होम क्वारेन्टिनमा बस्नु उपयुक्त हुने र आफूलाई गाह्रो भएमा मात्र स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अब उपत्यका प्रवेश गर्न स्थानीय तहको अनुमति अनि`वार्य
कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम रोक्न काठ`माडौँ प्रवेशका लागि आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार काठमाडौँ आउने व्यक्तिले त्यसरी स्थानीय तहको अनुमति लिएर आफू रहेको प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । उक्त अनुमति प्राप्तसहित निवेदन परेपछि सो विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ प्रशासनमा पठाउनु पर्नेछ ।